Wararkii ugu dambeeyay Itoobiya oo hub ka dejisay Garoonka Magaalada Kismaayo | Baydhabo Online
Wararkii ugu dambeeyay Itoobiya oo hub ka dejisay Garoonka Magaalada Kismaayo
Waxaa saacadihii ugu dambeeyay soo xoogeysanaayay wararka sheegaya in diyaarad xamuul oo laga leeyahay dalka Itoobiya, ay hub fara-badan ka dejisay Garoonka Magaalada Kismaayo.
Korneyl C/wahaab Cismaan Aadan oo ka mid ah Saraakiisha Ciidanka Xoogga ee ka hawlgala Gobolada Jubbooyinka, ayaa xaqiijiyay in diyaarad ay leedahay Dowladda Itoobiya, gelinkii dambe ee Arbacadii in ay hub ka dejisay Garoonka Kismaayo.
Korneyl C/wahaab Cismaan Aadan, ayaa sheegay in diyaaraddu ay waday hub fara-badan, ayna ka dejiyeen Ciidamada Maamulka Jubbaland iyo kuwa Itoobiya, ee ku sugan Magaalada Kismaayo.
Wuxuu intaa ku daray in hubkaasi lagu xareeyay bakhaaro ay Itoobiya ku dhex leedahay Garoonka Kismaayo, haddii ay yihiina Saraakiishii Ciidanka Xoogga ee Jubbooyinka, ay arrintaasi u arkaan mid khatar ah.
Korneyl C/wahaab Cismaan, ayaa tibaaxay inaysan garanayn cidda loo wada hubkaasi, ha yeeshee ay xogta ku helayan in hubku uu ku socday Maamulka Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), si loogu sii huriyo dhibaatada ka taagan dalka, sida uu yiri.
Sarkaalkan oo wareysi siiyay Idaacadda Dalsan, waxna laga weydiiyay in hubku uu qayb ka yahay hawlgalada Ciidamada Jubbaland iyo Amisom ka wadaan Gobolada Jubbooyinka, ayuu gaashaanka u daruuray.
Isagoo hadalkiisa sii wata, ayuu sheegay in dalku uu leeyahay ciidan, hub aanu ciidanku waxba ka ogayna aan la dhihi karin waa mid lagu xoreynayo dalka, isla-markaana ay u arkaan mid la doonayo in lagu gumaado shacabka.
C/wahaab Cismaan, ayaa Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo ugu baaqay in uu si dhow ula socdo fara-gelinta uu shisheeyuhu ka wado Gobolada Jubbooyinka, kaa oo aan rabin maslaxada dalka.
Dhanka kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in shan iyo labaatan Sarkaal oo ka tirsan Saraakiisha Ciidamada Itoobiya, ay gaareen Magaalada Kismaayo, xilli aan faah faahin laga hayn ujeedada ay u taggeen magaaladaasi.